बहुदलीय व्यवस्था पछि दोलखावाट चार मन्त्रीः गुरुङको अग्नि परिक्षा, बाँकी तिनले गरे यस्ता काम - Edolakha
बहुदलीय व्यवस्था पछि दोलखावाट चार मन्त्रीः गुरुङको अग्नि परिक्षा, बाँकी तिनले गरे यस्ता काम
7 months ago/Wednesday, December 11th, 2019
सिर्जना खड्का ।
दोलखा, २५ मंसिर ।
प्रजातन्त्रको पुर्नबहालीपछि दोलखाबाट चार जनाले सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना पछि तिन जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री भएर काम गर्ने अवसर पाएका हुन् ।
दोलखाबाट पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसका स्वर्गिय नेता भिमवहादुर तमाङले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए भने पछिल्लो पटक गत मँसिर ४ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता पार्वत गुरुङ सँघीय सरकारको महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बन्न सफल भएका छन् । दोलखाको राजनीतिमा छोटो अवधिमा उचाईमा पुग्न सफल नेता गुरुङ केपि ओली नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनवाट मन्त्री बनेका हुन् । यसअघि तत्कालिन एमालेका नेता (हाल नेकपाका) नेता आनन्दप्रसाद पोखरेल केपी ओेली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र तत्कालिन नेकपा माओवादीकी नेतृ (हाल नेकपाकै नेतृ) देवी खड्का झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री बनेकी थिईन् ।
मन्त्री गुरुङले के गर्लान् ?
सँधै विकास र समृद्धिको भाषण गरिरहने नेकपाका नेता पार्वत गुरुङ सँघीय मन्त्री बनेपछि उनको अग्निपरिक्षा सुरु भएको छ । सँघीय सरकारको मन्त्रीको हैसियतले सिँगो देश र उनी निर्वाचित जिल्ला दोलखाको विकास र समृद्धिमा भोलीका दिनमा कस्तो योगदान दिने छन् ? त्यसले गुरुङको बाँकी राजनीतिक जीवनलाई निर्धारण गर्नेछ । यसअघि मन्त्री बनेका नेताहरुको कार्य अवधि हेर्दा सवैभन्दा कम पूर्व राज्यमन्त्री देवी खड्का साँढे चार महिना, पूर्व पर्यटनमन्त्री पोखरेल ७ महिना र पूर्व कानूनमन्त्री स्वर्गिय तामाङले सवैभन्दा बढी १७ महिना मन्त्री पदमा रहेको देखिन्छ ।
मन्त्री तामाङको पालामा धेरै ऐन, कानून बन्यो
२०५१ सालमा कानूनमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सादगि एवँ त्यागि नेता भिमवहादुर तामाङ अहिले हामी वीच छैनन् । तर, नेपाली कांग्रेस दोलखाका पूर्व सभापति देवी न्यौपाने मन्त्री तामाङका कार्यकालमा धेरै नयाँ ऐन, कानूनहरु बनेको र कानून सुधारको काम भएको बताउनुहुन्छ । तामाङलाई नजिकवाट साथ दिएका बरिष्ठ कानुन व्यवसायी (हाल साँसद) राधेस्याम अधिकारी मन्त्री तामाङकै कार्यकालमा अधिकाँश लोकतान्त्रिक ऐन, कानून बनेको बताउनुहुन्छ । पञ्चायतकालिन ऐन, कानूनलाई फालेर नयाँ लोकतान्त्रिक कानून निर्माण गर्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण र जटिल बिषय भएको उहाँको भनाई छ । यद्धपि, मन्त्री तामाङको कार्यकालमा दोलखा जिल्लामा विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासको उल्लेख्य काम हुन नसकेको आलोचना हुने गरेको छ ।
देवीले ल्याईन् पूर्वाधार विकासका योजना
जनयुद्ध पछि शान्ति प्रक्रियासँगै बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा २०६८ साल बैशाख २१ गते तत्कालिन माओवादी नेतृ देवी खड्काले छोटो अवधिका लागि भएपनि भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाईन् । पूर्वाधार विकासकै मन्त्रालय भएका कारण उनको कार्यकालमा दोलखामा धेरै वटा सडकका र अन्य पूर्वाधार विकासका योजनाहरु परेका थिए । उनको कार्यकालमै प्राथमिकतामा राखिएका कतिपय सडक योजनाहरु अहिले पनि निर्माणकै चरणमा छन् । अहिले निर्माण भईरहेको लामोसाँगु–जिरी डबल लाईन सडक, जिरीदेखि रामेछाप हुँदै सोलुखुम्वुको ढिँग्रीसम्म जोड्ने सडक, मुढे मेलुङ, नयाँपुल पवटी डाँडाखर्क सडक, नाम्दु क्षेत्रपा जुँगु हुदै जोड्ने सडक लगायतका १५ वटा क्षेत्रिय सडक र ७ वटा सडक पुलमा आफू मन्त्री हुँदा प्राथमिकताका साथ बजेट बिनियोजन गरेको र क्रमागत योजनाको क्रममा हाल धेरैजसो योजना निर्माणकै चरणमा रहेको पूर्व राज्यमन्त्री खड्काको भनाई छ । जनता आवास कार्यक्रम मार्फत सुरेल बस्ति निर्माण, नमूना बस्ति अन्तर्गत शैलुङको झोर मनगाउँ र मालुमा गरी दुईवटा बस्ती पनि खड्काकै पालामा सुरु भएको थियो ।
पोखरेलको पालामा पर्यटन नीति र पर्यटन पूर्वाधारका योजना
केपि ओली नेतृत्वको सरकारमा २०७२ साल असोज १९ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका आनन्दप्रसाद पोखरेल करिब ७ महिना मन्त्री बनेका थिए । पोखरेलको कार्यकालमा पर्यटन नीति बनेको थियो । सो नीतिमा पर्यटन मार्फत् गरिबी निवारण, रोजगारीको सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटनको भौतिक पूर्वाधार विकास, होमस्टेको परिचालन, गन्तव्यको पहिचान लगायत उल्लेख छ । उनको कार्यकालमा बुद्ध नेपालमा जन्मेको मात्र नभई बुद्द दर्शनको उद्गमस्थल नेपाल नै हो भनेर बिश्वका सबै मुलुकवाट ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । त्यसमा भारतको समेत समर्थन रहेको थियो । बुद्ध दर्शनको प्रबद्र्धन गर्ने क्रममा अन्तराष्ट्रिय विभेदलाई समेत अन्त्य गर्ने गरी बुद्धको उद्भव नेपालमै भएको भनि आफ्नै कार्यकालमा घोषणा–पत्र जारी गरिएको पूर्वमन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।
बुद्ध लाईट अफ एसिया नभई लाईट अफ ग्लोभ, अर्थात् पृथ्वीकै प्रकाश भनेर स्थापित गर्न आफ्नो कार्यकालमा सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, पोखराको अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माणको सुरुवात, धरहराको डिपिआर तयार गरेर निर्माण कार्यको सुरुवात समेत आफ्नै कार्यकालमा भएको उहाँको भनाई छ । यस्तै, भुकम्प पछि ध्वस्त भएका दोलखाका ऐतिहासिक मठमन्दिर, त्रिपुरा सुन्दरी, भण्डार गृह लगायतका साँस्कृतिक सम्पदाहरु पुननिर्माणका लागि बजेट बिनियोजन पनि उहाँकै कार्यकालमा भएको थियो । जिल्लाको पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणका धेरै कामहरु आफुले योजनामा पारेर बजेट बिनियोजन गरी सुरु गरेको पूर्वमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । तर, उहाँ पर्यटन मन्त्री बनेको समयमा जिरी एयरपोर्ट सँचालन लगायतका कामहरु हुन नसकेको जिल्लावासीको गुनासो छ ।
पञ्चायतकालमा कृष्णप्रसाद सहायक मन्त्री
दोलखा जिल्लावाट प्रजातन्त्र पुर्नवहाली पछि मात्र नभई पञ्चायत कालमा पनि एक जना नेता सहायक मन्त्री बनेका थिए । तत्कालिन पञ्चायतकालका नेता स्वर्गिय कृष्णप्रसाद उप्रेती सूर्यवहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा २०३९ सालमा सामान्य प्रशासन सहायक मन्त्री बनेका थिए । उप्रेती करिव ९ महिना मन्त्री पदमा रहेका थिए । हिमाली जिल्ला दोलखाले ३५ बर्षको अवधिमा पाँच जना मन्त्रि पाएको छ । ति मध्ये तिन जना सँघीय सरकारको पूर्ण मन्त्री र बाँकी राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री मात्रै भएका हुन् । जिल्लाको राजनीतिक पहुँच पार्टी केन्द्रसम्म र सरकारसम्म पुग्दा विकास निर्माण, आर्थिक र सामाजिक अभियान आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने हो ? हेर्न बाँकी छ ।
२५ मंसिर २०७६ । ९ः३० बजे प्रकाशित
VIEWS: 14755 पटक हेरीएको